Safiirkii Qatar ee dalka Iran oo dib ugu laabtay dalkaasi | Maalmahanews
Safiirkii Qatar ee dalka Iran oo dib ugu laabtay dalkaasi
Safiirkii Qatar ee Dalka IRAN ayaa dib ugu laabtey magaalada Tehraan, kadib 20 bilood oo uu ka amqnaa halkaas iyada oo Qatar u samaysey sidaas taagerada dalka Sucuudiga, kadib markii IRAN ka mudaaharaadey dilkaas dabna la qabad siiyey safaaradda Sucuudiga ee Tehran.
Bayaan ka soo baxay Arrimaha Dibadda ee dowladda Qatar ayaa lagu yiri, waxaa dib ugu laabanaya Tehran Safiirkeeni waxaana uu dib u soo celinayaa dhamaan xiriirka diblomaasiyadeed iyo dhinackasta oo xiriir ah ee aan la wadaagno Iran.
Go’aanka Qatar ayaa imaanaya iayada oo Dalalka Sucuudi caraabiya, Imaaraatka, Baxreyn iyo Masar ay xiriirka u jareen Qatar kuna soo rogeen cunno-qabateyn dhankasta ah. Shuruudaha ay ku xireen waxaa kamid ah in ay xiriirka u jaraan dalka IRAN.
Dalka Qatar oo cunnooyinka daruuriga ah iyo biyaha ka heli jirey Sucuudiga ayaa hadda uw areegay dalalka Turkiga iyo IRAN.